Ngokuzenzekelayo Ngaba ukuThengisa uMatshini weFektri | KwiChina Ngokuzenzekelayo Ngaba Abavelisi boMatshini bokuDibanisa kunye nabaxhasi
I-SPAS-100 ezenzekelayo iyakwazi ukuLungisa umatshini
Lo matshini wokutywina uzenzekelayo usetyenziselwa ukuthunga zonke iintlobo zeetoti ezijikelezileyo ezinje ngetoti, iinkonkxa zealuminium, iinkonkxa zeplastiki kunye neenkonkxa zephepha. Ngomgangatho onokuthenjwa nokusebenza ngokulula, sisixhobo esifanelekileyo kwimizi-mveliso efana nokutya, isiselo, ikhemesti kunye nobunjineli bemichiza. Umatshini unokusetyenziswa wedwa okanye kunye neminye imigca yokugcwalisa imveliso.
Umatshini wokuThambisa oMatshini oZenzekelayo ngeNitrogen Flushing
Le mveliso isetyenziselwa ukuthunga zonke iintlobo zeetoti ezijikelezayo ezinje ngetoti yeetini, iinkonkxa zealuminium, iinkonkxa zeplastiki kunye neenkonkxa zephepha ezinomshini kunye nokugungxula ngegesi. Ngomgangatho onokuthenjwa nokusebenza ngokulula, sisixhobo esifanelekileyo kwimizi-mveliso efana nobisi olungumgubo, ukutya, isiselo, ikhemesti kunye nobunjineli bemichiza. Umatshini unokusetyenziswa wedwa okanye kunye neminye imigca yokugcwalisa imveliso.
Umthamo wobisi wobisi unakho ukuhambisa amagumbi china manufacturer
Eli gumbi le vacuum luhlobo olutsha lwe-vacuum yokuthunga umatshini oyilwe yinkampani yethu. Iya kulungelelanisa iiseti ezimbini zomatshini wokutywina oqhelekileyo. Indawo engezantsi iya kutywinwa kuqala, emva koko ityiswe kwigumbi lokufunxa i-vacuum kunye nokugungxulwa kwe-nitrogen, emva koko itywina liya kutywinwa ngowesibini ukutywina umatshini ukugqibezela inkqubo yokupakisha.